Microsoft Kutora Nhanho Kudzokera neAptlook 2007 | Martech Zone
Microsoft Kutora Nhanho Kudzoka neAptlook 2007
China, January 11, 2007 China, January 18, 2007 Douglas Karr
Kutenda kune vanhu pamusoro pa Sitepoint nekuti izvi zvinokwira kumusoro.
Ndiwo sarudzo dzakadai dzinokuita kuti unetseke nezve Microsoft. With Outlook 2007, Microsoft haichazopa kupa email uchishandisa browser. Asi ivo vari kuzoshandisa Izwi.
Izvi zvinoguma nemhedzisiro inotevera muAptlook:
hapana rutsigiro rwemifananidzo yekumashure (HTML kana CSS)
hapana rutsigiro rwemafomu
hapana rutsigiro rweFlash, kana mamwe ma plugins
hapana rutsigiro rweCSS inoyerera
hapana rutsigiro rwekutsiva mabara nemifananidzo mune zvisina kunyorerwa zvinyorwa
hapana rutsigiro rweCSS chinzvimbo
hapana rutsigiro rweanogarwa maGIF
Mvumo-yakavakirwa email kushambadzira iri pakupedzisira kuwana kugamuchirwa uye kukurumidza pamwe neyakajairika. Kudyidzana nevaverengi kuri padhuze seinotevera 'chinhu chikuru' kuburikidza nechiitiko chinokonzeresa uye nekuwedzera kudyidzana kwedata.
Ndichishandira mvumo-based email sevhisi, ini ndanga ndakatarisira hutsva hutsva mumaemail vatengi - mikana senge Flash muEmail, Vhidhiyo muemail, Chat muemail, kunyangwe Rich Email Maapplication ayo anogona kubvumidza vanhu kusangana nemabhangi avo, avo basa, shamwari dzavo, nemaapplication avo zvakachengeteka uye zvakachengeteka.
Zvinotaridza kuti Microsoft iri kuzochinja izvo. Microsoft inotonga musika weemail… saka ivo vane mukana wekunyatso kuvandudza ruzivo rwevatengi nekuvandudza zvigadzirwa zvavo. Semutungamiri wemusika, ibasa ravo. Asi, vanoita kunge vakatora nzira yakapusa ndokundikana kuita kwakaoma.
Iyi ndiyo mhando yesarudzo inofanirwa kunge iine vamwe vatambi veemaimeri vanogadzira mate. Kana usati wanzwa zita racho Thunderbird… Iwe zvachose uchaita gore rino!
Kune avo vari muIT vanogona kufunga kuti ichi chikomborero, vangangove vari kurwara uye vaneta nekufunganya nezve nyaya dzekuchengetedza dzakabatana neemail. Nekudaro, hupenyu hwavo hwakatowedzera kuomarara. Rudzi urwu rwechisarudzo runongoita kuti vashandisi vatore uye vaise zvimwe zvinoshandiswa izvo chido tsigira kudyidzana kwakapfuma kwavari kutsvaga. Ikozvino IT inofanirwa kunetseka nezve chii chinotevera uye maitiro ekuzvidzora.
Mumwe muenzaniso: Ini ndinorangarira apo IT vanhu mune imwe hombe kopi yandaishandira yakavharidzirwa zvakanamatira muemail. Nekuda kweizvozvo, munhu wese mukambani akangobuda ndokutora hotmail kero. (Pakupedzisira ndakanzwa, izvi zvichiri kuitika kwavari).
NdiMicrosoft. Unogona kuita zvirinani kupfuura izvi! Iyi ndiyo mhando yesarudzo isina mutsindo irikuzokonzeresa kusuwa kukuru neemail Service Provider, maAgency, Vatengesi… uye kupfuura zvese, vashandisi vako.
Apple Inovhura… Runhare. Pane mumwe munhu anovheneka?
WordPress: Vaka Iyo Peji Peji mu3 Nyore Matanho
Ndira 11, 2007 na11: 21 PM
Ndinozviziva ini ndakarega kushandisa Outlook senge iyi vhezheni itsva uye iyo nguva thunderbird inogadzira beta kutenderera ini ndiri kuzotarisisa zvakanyanya zvakare; kunyanya kupihwa iko kuwedzera kwekumaka.
Jan 16, 2007 pa 10: 22 AM
Ivo chete vanhu vane hanya neAptlook 2007 vachishandisa Izwi kupa maemail, uye kurasikirwa kwezvinhu zvambotaurwa vagadziri uye vanogadzira. Kwete VASHANDI!
Ndeupi mushandisi akataura? Ini ndinoshuva dai ndakawana akawanda eaya asina maturo ekutengesa maemail!?.
Ndeupi mushandisi akataura? Ini ndinogona kungoenda hombe yekumashure pikicha yemaemail angu !?
Ndeupi mushandisi akataura? Ini ndinoshuva dai ndaigona kuteedzera yakavhurika kuverenga emaemail angu!?
Jan 16, 2007 pa 11: 14 AM
Ini neruremekedzo handibvumirani newe uye ndoziva, zvichibva pamakore e data, kuti iwe uri mune vashoma. Vashandisi havafarire spam, asi ivo vanonakidzwa neemaesthetically kufadza maemail nezvirimo zvavari kutsvaga. Iwo makasitoma andinoshanda nawo anombowana chero shanduko kubva kune zvinyorwa-zvakavakirwa maemail. HTML email inovhurwa, ndokudzvanywa, uye nekushandurwa nemutengo wekujekesa.
Maemail asina chinangwa haafanire kutumirwa. Nekudaro, kutumira iyo yakakodzera email ine yezvakanaka zvemukati panguva chaiyo inoda kuti kuteedzera kuvhure, tinya-kuburikidza uye nekushandurwa pane maemail kuti uone kuti chako kuravira chii. Isu tinopa zano vatengi vedu kutumira mashoma maemail mune zvidiki zvidiki zvine zvakanangwa zvemukati kuti vawane mhinduro ... uye zvinoshanda. Nyaya iripo, kuongororwa kwakanakisa kwekuunganidza dhata pane mutengi uye nekuvapa izvo zvavanoda.
Panzvimbo pekuwana isina mameseji email, hazvingave zvakanaka here kutora ongororo inobvunza kana iwo musoro wenyaya une hukama newe? Uye zvichibva pamhinduro iyoyo, kambani inopindura nenzira kwayo? Outlook 2007 vatengi havazove neichi chiitiko nekutenda kune imwe nutty sarudzo kumusoro kwecheni yemirairo.
Zvakafanana nekupinda muresitorendi yako yaunofarira uko kwavanoziva zita rako, tafura yaunofarira, uye madiro aunoita chikafu chako. Ivo havana kuita izvo vasina kuunganidza iwo ruzivo kubva kwauri. Hazvina kusiyana newebhu kana email!
Jan 16, 2007 pa 11: 38 AM
Kunze kwekutarisa uye kunzwa kweiyo email, iwe unogona kuita zvese zvekugadzirisa mune zvinyorwa. Asi ini handisi kuramba chokwadi chekuti vashandisi vanofarira maemail akanaka, ndinoita. Zvandiri kuyedza kuwana ndezvekuti maemail magwaro, uye kwete mapeji ewebhu. Iwe uchave unokwanisa kuwedzera yepamberi contect kumaemail ako neWPF \_ E nezvimwe zvinhu zvinouya. Izvi zvese zvichave papuratifomu yakazvimiririra uye inobvumidza iyo dhizaini yakawanda grater renji kupfuura html, inosanganisira yakazara inofambidzana 3d enviroments.
Chikonzero chikuru chekuti IE mutenderi abviswa ndechekuti kune grater kuwana iyo Windows API. Uye kana paine chero "Chengetedzo" mabhokisi anopindirana neuri ivo vakafanana ne "OK" sechero chinhu.
Nekudaro kuvharirwa kwezvakawanda zvisina kuchengetedzwa zvakabatanidzwa kune vese mutengi uye Exchanage level. Iwe unozove wakapihwa mukana wekumhanya .NET kunyorera mune iyo enviroment seyese .NET maapplication kubva kune zvisina kunyorwa masosi anomhanya mune yakachengeteka, yakaratidza sandbox iyo yakadzora kupinda panguva isingavhiringidze hupfumi hwezviri mukati.
Iyo yekufambisa kune OpenXML email fomati ndeye master sitiroko ye microsoft. Zvinoreva kuti zvigadzirwa zvavo zvinowirirana nezvimwe zvigadzirwa zveOpenXML senge StarOffice uye OpenOffice. Izvi zvinobvumidza vashandisi kuti vatame kubva kune avo vatengi, uye vamwe vakaita seAptlook Express kuenda kuAptlook vasingatombofaniri kuenda kune yavo yekufananidza email fomati.
Jan 16, 2007 pa 11: 40 AM
Maapplication echirungu chakaipa! Uropi hwangu hunoshanda nekukurumidza kupfuura zvigunwe zvangu!
Ndira 16, 2007 na1: 02 PM
Ini ndinowanzo gadziridza zvinyorwa zvangu ka2 kana katatu mushure mekunge ndawana kukanganisa kwangu! Hapana kunetseka.
Mapoinzi ako akanaka… asi ndinofunga tinofanirwa kupokana neemail senzira yekufambisa chete. Chimbofungidzira kuti yakanaka sei email inogona kunge iine yekuwedzera mashandiro uye kusangana!